Knowledges Zone: Gmail ပို့ချင်တဲ့ အချိန်ပို့
Gmail ပို့ချင်တဲ့ အချိန်ပို့
ခေါင်းစဉ်ကို ဘယ်လိုပေးရမှန်း မသိလို့ ထင်ရာပေးလိုက်တယ် - Gmail ပို့ချင်တဲ့ အချိန်ပို့ ဆိုပြီး ဆိုင်လား မဆိုင်လားတော့ မသိ
ဒီနေ့တော့ အားတဲ့ အချိန်လေး အင်တာနက်ထဲ စာလိုက်ဖတ်ရင်း တွေ့မိခဲ့တဲ့ Extension လေး တစ်ခုအကြောင်း မျှဝေချင်ပါတယ်။ Extension ဆိုပေမယ့် သူက လောလောဆယ်မှာ Beta အဆင့်ပဲ ရှိသေးတာ မို့လို့ Browser တိုင်းသုံးလို့ မရသေးပါဘူး - လောလောဆယ် အခြေအနေမှာ Chrome နဲ့ Firefox မှာပဲ Extension တွဲလို့ ရပါသေးတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့ Boomerang ပါ -
Boomerang က ဘာလုပ်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေဆီကို တစ်နေ့ နဲ့ တစ်နေ့ Emails တွေ ရောက်လာတာ ရှိတယ် - တစ်ခါ တစ်လေ ကိုယ်က Emails ပြန်ပို့ ရတာရှိတယ် - အဲလို အခြေအနေမျိုးတွေမှာ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ - ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ဆီကို Emails တစ်ခု ရောက်လာတယ် - အကြောင်းအရာက နောက်တစ်ပတ် " .... " အချိန် " ..... " နေရာမှာ မိတ်ဆုံစားပွဲ ရှိတယ် - တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားပါတယ် - စသဖြင့် ဖိတ်ကြားချက် Mail တစ်စောင် ဆိုကြပါစို့ - လောလောဆယ် ကျွန်တော်က ဒီ သီတင်းကို သိတာ မှန်ပေမယ့် တကယ် ကျင်းပမယ့် မိတ်ဆုံစားပွဲ အချိန်က ဒီနေ့ကနေ စရေတွက်ရင် တစ်ပတ်တောင် လိုသေးတယ် - ဒီတော့ ကျွန်တော့်မှာ ကြားထဲ တစ်ခြား အလုပ်ကိစ္စတွေ ဘာတွေနဲ့ - သူ့ထက် သူ့ထက် အရေးကြီးတာတွေ ပေါ်လာပြီး တကယ်တမ်း နောက်တစ်ပတ်ကိုလည်း ရောက်ရော အဲ့နေ့မှာ ကျွန်တော် မိတ်ဆုံစားပွဲ သွားရမယ် ဆိုတာ သတိမရတော့ဘူး - အဲ့တော့ Result အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မေ့လျော့မှုက သေသေချာချာ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို အလေးမထားသလို ဖြစ်သွားရော - ဒါမျိုး မဖြစ်ရအောင် - Boomerang က ကာကွယ်ပေးပါတယ် - သူက ဘယ်လို လုပ်ဆောင်လဲ ဆိုရင် -
အထက်မှာ ဖော်ပြထားသလို နောက်မှ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖော်ပြထားတဲ့ Mail တစ်စောင် ကိုယ့်ဆီ စောစီးစွာနဲ့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အခါ - အဲ့ဒီ့ Mail ကို ကိုယ်အမှတ်တကယ် သိဖို့လိုအပ်တဲ့ အချိန် ချိန်းဆိုထားတဲ့ ရက်ရဲ့ ( ဥပမာ - တစ်ရက်ကြိုစောပြီး - တစ်နာရီ ကြိုစောပြီး ) စသဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်အသိပေးခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာ ကိုယ့်ဆီ ဝင်လာတဲ့ Mail ကို Schedule လုပ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဝင်ခိုင်းတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့ -
လုပ်ဆောင်နည်း အကြမ်းမျဉ်းကို မိတ်ဆက်ပေးရရင် ကိုယ့်ဆီဝင်လာတဲ့ စာတွေထဲက နောက်တော့မှ ပြန်ဝင်လာစေချင်တဲ့ စာကို ဖွင့်ပြီး အထက်ပါပုံမှာ မြင်နေရတဲ့ နေရာကနေ တစ်ဆင့် နောက်တစ်နာရီမှလား - နှစ်နာရီမှလား - နောက် လေးနာရီလား - မနက်ဖြန် မနက်လား - ကိုယ့်ဘာသာ အချိန်သတ်မှတ်ချင်တာလား ( Ataspecific time ) ဆိုတဲ့ Options တွေထဲက တစ်ခုခု ကို ရွေးလိုက်ပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က ( Ataspecific time ) ကို ရွေးလိုက်မယ် ဆိုရင် ဒီအောက်ကပုံစံလေး အတိုင်း Schedule box ပေါ်လာပြီး ကိုယ့်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ အသိပေးစေချင်တဲ့ ( နောက်တစ်ကြိမ် စာထပ်ဝင်လာစေချင်တဲ့ ) အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။
ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ နောက်နေ့တွေမှာ ပို့စရာ ရှိနေတဲ့ စာတွေကို သတိရတဲ့ အချိန် ကြိုရေးထားပြီး Schedule နဲ့ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ အချိန်မှ ပို့ခိုင်းထားလို့ လည်း ရပါသေးတယ်။
ဒီလို လုပ်ဆောင်ထားခြင်းအားဖြင့် ဘာကောင်းသွားလဲ ဆိုလျှင် မမေ့မလျော့ မပျက်မကွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် Birthday wish တို့ ဘာတို့ကို အဲ့နေ့ ရောက်လို့ ကိုယ် သတိရတာ မရတာ အရေးမကြီးတော့ပဲ - လတ်တလော သတိရနေတဲ့ အချိန် ကြိုရေးထားပြီး Schedule လုပ်ထားခြင်း အားဖြင့် ဝတ္တရားပျက်ကွက်မှုတွေ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး - Mail က အချိန်တန်ရင် သူ့ဘာသာသူ ကိုယ် သတိရရ - မရရ ပို့ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
Boomerang ကို ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း သုံးနိုင်ဖို့ Extension ကို ဟိုးနောက်တစ်ဆင့်မှာ ဖော်ပြသွားမယ့် နေရာကနေ Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ Install လုပ်ဆောင်ပြီး သွားရင် Gmail ထဲကို ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ ခုလို မြင်တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
လောလောဆယ် အခြေအနေမှာ Boomerang က Beta အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးလို့ နဲနဲ bug တာလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အဲ့ အတွက်တော့ ကို KznT ဘာဖြစ်လဲ မသိဘူး - ကျွန်တော့်စက်မှာ သုံးမရဘူးတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့ - ကျွန်တော်လည်း မဖြေရှင်း တတ်ပါဘူး - ကျွန်တော်က ဒီလိုလုပ်လို့ ရကြောင်း ဝေမျှတာပါ - အချိန်တန်ရင် bug တာတွေကို သူပြန်ပြင်ပေးပါလိမ့်မယ် :D
Boomerang Extension ကို Firefox မှာ ဖြစ်ဖြစ် Google Chrome မှာဖြစ်ဖြစ် install လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် ဒီစာမျက်နှာကို သွားပါ။ ရောက်ရင် မြန်မာမိသားစုအတွက် Twitter ကနေ ကျွန်တော် သွားတောင်းထားတဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ invite code ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ( သူက မာနကြီးတယ်ဗျ - သူ့ Boomerang Extension ကို ဒီအတိုင်း ဒေါင်းလုပ်ချခွင့် မပေးဘူး - ကျွန်တော့်မှာ Twitter ကနေ ဝင်ပြီး သူ့ @baydinsoftware ကို follow လုပ်ရသေးတယ် နောက်ပြီး Invitation code လေး ပေးပါဗျာ ဆိုပြီး Tweet က လုပ်ရသေးတယ် )
သူက အဲ့တော့မှ ကျွန်တော့်ကို invitation code ပြန်ပို့ပေးတာဗျ ဒီမှာသာကြည့် မာနတော်တော်ကြီးတဲ့ကောင်
ကျွန်တော့် မိသားစုဝင်တွေတော့ ဒါတွေ လုပ်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး - ကျွန်တော် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ invitation code ကို အဲ့စာမျက်နှာ ဖြည့်ပြီး install လုပ်ဆောင်ယုံပါပဲ။ Firefox သုံးတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ Firefox 3.6+ ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
The invitation code for Boomerang for gmail = b4gtweet
နောက်ပြီး ကျွန်တော် လူလည်ကျထားတာ ရှိသေးတယ် - ချလို့ ရတုန်း တစ်ခါတည်း IDM နဲ့ ချပြီး ifile မှာပါ တင်ထားလိုက် တယ် - အဲတော့ တကယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေ အဲ့ စာမျက်နှာကို ဝင်မရတာ ဘာညာ ပြဿနာ ရှိလာရင် ဒီ ifile ကကောင်လေး ကို Download ချပြီး သက်ဆိုင်ရာ Browser မှာ install လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။
Boomerang.rar 0.091 MB
အသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ video ကနေ ထပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲတော့ သူငယ်ချင်းများ စမ်းသပ်ကြည့်လို့ ရပါပြီ
Written By: KznT.
Posted by Knowledges zone
အီးမေးလိပ်စာထည့်ခဲ့ပါ အသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးပါမည်။
Ad.ware anti virus software
anti virus software. webroot
anti virus . Virus များကာကွယ်ရန်
Free avg.anti virus
anti virus MCatee
how to acitvate window xp
မြန်မာ photoshop training
Book Hive library
အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်း online
spot light ရေဒီယို learning english
ဗွီအိုအေ Special learning english
ဘီဘီစီ Learning english
Grammer, Idioms ,Speaking
Myanmar Climate Chage watch
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိ တိရစ္ဆာန်တွေရဲံ့ အကြောင်းလေ့လာကြရအောင်
Web Designer ပြုလုပ်မည့်သူများအတွက်
အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ ဗီဒီယိုကားတွေ ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ သင်ကြားပေးနိုင်တဲ. ဆိုက်
အင်တာနက်ပေါ်သို့ နောက်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ သတင်းမျိုးစုံ
( ကွန်ပျူတာ အထူးကဏ္ဍ )Windows လိုင်စင်နံပတ် Product ...
komyo ဓါတ်ပုံတွေကို နောက်ခံသီချင်းလေးတွေနဲ့ မြန်မာ...
Flash file (SWF File) တွေ ဖွင့်ပေးမယ့် Player
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Game Download Websites များ
ဖုန်းရဲ. Stadby ကို ပြောင်းကြည့်ရအောင်
SWF To Video Conveter ( SWF ဖိုင်ကို Video ပြောင်း...
ဆော့ဝဲမပါဘဲ Folder လော့ချတဲ့ နည်း
USB (pen drive) ကို Virus ကိုက်လို့ စိတ်ညစ်နေလား
Window7 uploader (producut key serial crack)
USB Disk Security.v5.4.0.6.Full.AiO
Recuva v1.36.(ဖျက်ပစ် ပြီးတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြန်ရအော...
USB Block(ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို လ...
Contraceptive Pills ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့အကောင်းအဆိုး....
Background ပြောင်းမယ် ၃ - Photo Shop Tutorial (pen...
SlimComputer Free Software to Speed-up Computer Pe...
Jet audio Skin လုပ်နည်း
Background ပြောင်းမယ် ၁ - Photo Shop Tutorial (vec...
Background ပြောင်းမယ် ၂ - Photo Shop Tutorial(Filt...
window7တင်နည်း ( Part 1)
ကိုယ်ပိုင် google website ဖွင်.ဖို.နည်းလမ်း
( ကွန်ပျူတာ အထူးကဏ္ဍ ) Windows7မှာ Hibernation ကို...
Photo Shop Tutorial (1) - bolder ကိုပဲ အနည်းငယ် ဆန...
အခြေခံ ကွန်ပျူတာ Virus များရှင်းလင်းခြင်း
Informatics Academy ကျောင်းဝင်ခွင့် ဇန်န၀ါရီတွင်ေ...
Video chat မှာ မိမိ မျက်နှာကို ရုပ်ပြောင်လေးတွေ သံ...
အလွယ်ကူဆုံး File Sharing နည်းပညာအား အသုံးချခြင်း
ဖတ်စေချင်သော စာအုပ်များ (အထွေထွေ ရသ၊ သုတ)
How to Add Avi movie in sub Title
Norton AIO Pack Update 05.01.2011
ကွန်ပျုတာတွေမှာ ရှိသင့်တဲ့ Software ...
Bigasoft Total Video Converter Portable
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥ...
ဦးနု ( မိတ္တဗလဋီကာ )
" ကမ္ဘာပျက်တော့မယ့် နိမိတ်တွေ စ ပြနေပြီ "
မြန်မာအိုင်တီပညာရှင်များ ရေးဆွဲသည့် VOIP ဖုန်းစနစ်...
မြန်မာစာယူနီကုတ်မရိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် Click နှိပ်...
Render Zawgyi With TypeFace For Embeding
AVG Internet Security 2011 Build 3330 Multilingual...
Circle Dock (Portable)
Photoshop tool box shortcut key
Gmail ကို Schedule လေးနဲ့ ပို့ကြည့်မယ်...
မလိုချင်တဲ့ Partition ကို Delete လုပ်မယ်.....
ကွန်ပျူတာ window ကိုယ်တိုင် တင် နိင် ရန်
CleanAfterMe – Portable Registry Cleaner
Beginners Guide to Networking
ဘ၀မှာ ဘာတွေအရေးကြီးလဲလို့ မေးလာပါလျှင်.......
Mega Collection of Icons Over 3000
lingoes portable dictionary 2.7.1
How To: Watch Videos Faster On YouTube
Ten Points You Should Do
Folder တွေကို အရောင်ပြောင်းရအောင်
Windows7Tips & Tricks E-Books Collection (Part-1...
မိခင်လောင်းများ စားသောက်သင့်သော အစားအစာ ၁ဝ မျိုး
Ultimate defrag Software
ဒုတိယနိုင်ငံ နှင့် တတိယနိုင်ငံသားတွေအတွက်
Gmail ရဲ့လှုိူ့ ဝှက်ချက်တွေ
Auto PowerOn and Shutdown 2.10
Registry Mechanic 6.0.7 လေးပါ..
PaDa Anti Virus software လေးပါ....
Windows7 Dream Edition (86bit)
မြန်မာပြည်ကနေ အလွယ်တကူ proxy ကျော်ကြည့်နည်းများ
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကျော်ခွဆိုဒ် ရှာနည်း
ပြည်တွင်းက မိတ်ဆွေတွေအတွက် ကျနော်တို့ ဒီကနေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ proxy ဆိုဒ်တွေကို ခဏခဏအပိတ်ခံနေရတဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေ့နေသူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ရှာလို့ရတဲ့နည်းလေးပါ။ google တို့ yahoo တို့မှာ appspot proxy ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ရှာလိုက်ပါ။ Update ဖြစ်တာ အမြဲထိပ်ဆုံးမှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဆိုကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီး ကျော်ခွနိုင်ပါပြီ။ ဒီ appspot proxy ဆိုတဲ့ စာသားလေးပဲမှတ်ထားရမှာပါ။
Site တွေ တဆင့်ခံပြီး သုံးနည်း
ကိုယ့်ဘာသာရှာလို့ရလာတဲ့ proxy ဆိုဒ်တွေကို တဆင့်ခံသုံးပြီး ကျော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်။ proxy ဆိုဒ်တိုင်းမှာ Link လိပ်စာရိုက်ထည့်ပြီး ကျော်ဖို့ အကွက်လေးတွေ ပေးထားပါတယ် ။ အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်ဖွင့်ချင်တဲ့ ဆိုဒ် စာကို ရိုက်ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်များများက သိပြီး ဖြစ်မှာပါ။
Proxy Server တွေက Proxy Number တွေကို အမြဲလိုပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက် Proxy ကိုသုံးရမှာ ပြဿနာနည်းနည်းရှိပါတယ် ဒါကြောင့် Site တွေ တဆင့်ခံပြီး သုံးလာပါတယ်။
ဒါကတော့ Solakoko ရဲ့  IT Sharing site တစ်ခုကနေ ကူးပေးလိုက်တာပါ
ထိပ်ဆုံက လင့်ခ်တွေကနေ စမ်းသုံးကြပါ
Youtube,Blogger,Ning,Gmail ,etc.. စတာတွေအကုန်ကျော်လို့ ရပါတယ်
ကွန်နက်ရှင်တော့ နဲနဲ ကောင်းဖို့ လိုတာပေါ့
ဒါကတော့ Facebook က ကိုကြည်ဝင်းဆိုတဲ့ အကို တင်ပေးထားတဲ့ဆိုဒ်ကလေးတွေပါ
koKaungkhant Mintun ဆီကနည်းပါ။
ပထမဆုံးကတော့ Proxy သုံးပြီင်္း ကျော်တဲ့နည်းလေးပါ
Firefox ရဲ့  Tools>>Options>>Advanced>>Network>>Setting ကနေ Manual Proxy Setting ထဲကို Proxy နဲ့ Port ရိုက်ပြီး reload လုပ်ပြီး သုံးတဲ့နည်းပါ မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပါ။
ခုဟာက အဆင်ပြေ...တဲ့ Proxy list ကလေးပါ
IP 203.81.81.38 Port 80
IP 203.81.81.49 Port 80
IP 212.93.193.88 Port 443
IP 212.116.220.100 Port 443
IP 212.93.193.89 Port 443
IP 212.93.193.90 Port 443
IP 134.153.184.17 Port 443
IP 212.116.220.149 Port 443
IP 192.18.102.59 Port 443
IP 212.93.193.82 Port 443
IP 212.93.193.83 Port 443
IP 212.93.193.72 Port 443
အဆင်ပြေမှာပါ မပြေရင်လည်း ပြောပေါ့ဗျာ ကျော်နိုင် ခွနိုင်ကြပါစေ။
http://www.myanmarproxy.tk(cannot to view youtube)
ယနေ့မြန်မာ ဟစ်တိုင် နိရဉ္စရာ
NLD(LA) NLD(LA)JB nldlanagoya
နစ်နေမန်း Dr.လွဏ်းဆွေ အာဇာနည်
ခမိခဆဲ လွင်ပြင် ဖြိုးဝေ-mmp
ဝေယံမင်း ဒေါင်းမာန်ဟုန် မြေသြဇာ
ခွပ်ဒေါင်းကြယ်စင် ဆုံဆည်းရာ မဆုမွန်
G Wave မြန်မာပြည်သား FlyingPeacock
ဒေါင်းတမာန် လမ်းပြကြယ် ဝိမုတ္တိ
နေပြည်တော် ရဲ့ရင်ငယ် မင်းသုည
မျိုးချစ်မြန်မာ အာလူးလေး ဆွေနိုင်
ဖိုးရှုပ်လေး မေတ္တာမီးအိမ် မင်းဓမ္မ
ငွန်ငယ်မိုး ဒီရေ မျိုးဆက်သစ်-လူငယ်၂၀၁၀
၈၈ ရဲ့ နော်မန် မောင်ပါလ မင်းရန်နိုင်
အလင်းတန်း freedomburma freeburma-freeburma
နေ့စဉ်မြန်မာ-သတင်းများ မိုးသောက်ကြယ် အိုးဝေအောင်
ဗမာ့သွေး ဆုံဆည်းရာ သောသိခို
Craton ကိုပီတာရဲ့ အတွေးပုံရိပ်များ SimpleViews